ထီ Archives - Thutasone
July 11, 2020 Thutasone 0
ရောငျးခရြနျထီလကျမှတျ(10)သိနျးဖိုးခနျ့အိတျမှားပါသှား၍ ရရှိထားသူမှပွနျလညျဆကျသှယျပေးပါရနျတောငျးဆိုပါသညျ ဧရာဝတီတိုငျး ညောငျတုနျးမွို့နယျသဇငျရကြေျောကြေးရှာနေ ဦးမိုးသီးသညျမအူပငျမွို့ မိုးယံထီဆိုငျမှ ထီလကျမှတျမြားကိုရှာတှငျပွနျရောငျးရနျ 5.7.2020ရကျနမေ့နကျ(10)နာရီခနျ့တှငျမအူပငျတှငျသှားယူပွီးရနျကုနျသို့သှားမညျ့ရှကေိန်နရီကားဖွငျ့ မအူပငျဘုရားလမျးမှတကျစီးခဲ့ပါသညျဆားမလောကျအမှတျ(2)မွောငျးတှငျဆငျးခဲ့ရာ ကားသမားခပြေးသောပီနံအိတျအဖွူကို မိမိအိတျနှငျ့အလှနျတူနသေောကွောငျ့ယူပွီးရှာသို့ပွနျခဲ့ရာ ရှာရောကျမှမိမိအထုပျမဟုတျမှနျးသိရပါသညျမှားပါလာသောအထုပျထဲတှငျ အသီးအနှံမြားသာပါလာပါသညျဦးမိုးသီးအထုပျထဲတှငျ ရောငျးခရြနျထီလကျမှတျ(10)သိနျးဖိုးခနျ့နှငျ့အခွားသူမြားမှမှာလိုကျသော ဆေး မညှနျ့မဆေေးလိပျ ကြားပဲမုနျ့မြားပါသှားပါသညျ ဦးမိုးသီးသညျ အသကျ(89)နှဈအရှယျရှိ မိခငျအိုကွီးနှငျ့သားအမိနှဈယောကျတညျး ထီရောငျးရငျး ဘဝကိုခကျခဲစှာ ရုနျးကနျရှာဖှစေားသောကျနရေသူတဈဦးပါ ယခုအခါထီလကျမှတျဖိုးမြား ပွနျပေးရနျလညျးလှနျစှာအခကျအခဲရှိနပေါသညျအိတျမှားရရှိသှားသူအနဖွေငျ့သနားငဲ့ညာသောအားဖွငျ့ပွနျလညျဆကျသှယျပေးပါရနျ […]
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ခု ယခုနှစ် ထဲမှာ ထီကံ အကောင်းဆုံး နေ့ဖွားများ
July 9, 2020 Thutasone 0
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ခု ယခုနှစ် ထဲမှာ ထီကံ အကောင်းဆုံး နေ့ဖွားများ ဒီတစ်နှစ် မြန်မာခုနှစ် ၁၃၈၂ ထဲမှာ ထီကံနံပါတ်တစ် အကောင်းဆုံး ဖွားဇာတာရှင်တွေ သည် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု ဖွားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့် ထီကံအား အကောင်းဆုံး နေ့နံကတော့ စနေနေ့ ဖွားများ […]
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ် . . .
June 30, 2020 Thutasone 0
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်းဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ် ထီထွက်ခါနီးပြီးနော်_ကံစမ်းပြီးပြီလား ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် ….ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့…. 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( […]
ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ သိန်း(၁၀၀)ပေါက်တဲ့ အလုပ်သမမှ အလုပ်ရှင်ရဲ့စီမံပေးမှုနဲ့ ဘဝတူ အလုပ်သမတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေး . . .
May 5, 2020 Thutasone 0
မော်လမြိုင် NWT ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ သိန်း(၁၀၀)ပေါက်တဲ့အလုပ်သမမှ အလုပ်ရှင်ရဲ့စီမံပေးမှုနဲ့ ဘဝတူ အလုပ်သမတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါပြီး အလုပ်ရှင်မိသားစုရဲ့စီမံပေးမှုနဲ့ ထီသိန်း(၁၀၀) ကံထူးခဲ့သည့် ကွမ်းသီးပွဲရုံအလုပ်သမ မော်လမြိုင်မြို့သီရိမြိုင်(၁၂)လမ်းနေ မစန်းစန်းနွယ် မိသားစုမှ သူမနဲ့ အတူတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ်ဦးနေဝင်းသူရဲ့ (NWT)ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ ဘဝတူ အလုပ်သမ(၄၀)ကျော်ကို တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် တတ်နိုင်သလောက်အလှူအဖြစ် […]
(၁၅) ကြိမ်မြောက်တွင် မရောင်းရ ထီလက်မှတ်များ ဆုမဲပြန်လည်ခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် . . .
May 2, 2020 Thutasone 0
(၁၅) ကြိမ်မြောက်တွင် ဝေဝေဆာဆာဆုမဲစနစ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော မရောင်းရထီလက်မှတ်များ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအား ဆုမဲပြန်လည်ခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ (၅ )ဆု ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ (၅ )ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၅၀၀(၅ )ဆု ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ (၁)ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ […]
အလုပ်ရှင်မှ ကွမ်းသီးပွဲရုံ အလုပ်သမတွေကို ထီဖိုးငွေစိုက်ထားပေးပြီး အဆင်ပြေမှ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်စနစ်ဖြင့် ထီထိုးပေးရာမှ ကံထူးသွားခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင်
အလုပ်ရှင်မှ ကွမ်းသီးပွဲရုံအလုပ်သမတွေကို ထီဖိုးငွေစိုက်ထားပေးပြီး အဆင်ပြေမှ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်စနစ်ဖြင့် ထီထိုးပေးရာမှ သိန်း(၁၀၀)ဆုပေါက် သိန်း(၁၀၀)ကံထူးရှင်ကတော့ မော်လမြိုင်မြို့သီရိမြိုင်(၁၂)လမ်းမှ မစန်းစန်းနွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံကတော့ မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ်မှဦးနေဝင်းသူရဲ့ (NWT)ကွမ်းသီးပွဲရုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲရုံအလုပ်သမလေးတွေက ထီတစောင်(၁၀၀၀) ပေးထိုးဖို့တော်တော် စဉ်းစားရတဲ့ အခြေအနေပါ။ မိသားစု […]
ပထမနေ့ ဒုတိယနေ့ အောင်ဘာလေထီ ပေါက်ဂဏန်းများ စုစညိးတင်ပြပေးလိုက်ပါသည် . . .
ပထမနေ့ ဒုတိယနေ့ အောင်ဘာလေထီ ပေါက်ဂဏန်းများ စုစညိးတင်ပြပေးလိုက်ပါသည် ထီဖွင့်ပွဲ ဒုတိယနေ့ ဆုမဲများ ကျပ် (၁၀) သိန်းဆု (၁၆) ဆု ၁၀ သိန်း ဎ ၉၈၄၁၉၈. ၁၀ သိန်း ဈ ၄၈၂၉၆၃. ၁၀ သိန်း ရ ၃၈၆၄၇၉ […]
သိန်း (၁၅၀၀၀)ထီ ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြရာ သားလေးရဲ့ကံကြောင့်ဟုဆို . . .
May 1, 2020 Thutasone 0
သားသားနဲ့အစ်မနဲ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထိုးတဲ့ အစောင်ကနေ သိန်း(၁၅၀၀၀)ထီ ပေါက်ခဲ့တာပါ… သားလေးရဲ့ကံကြောင့်လည်း အများကြီးပါတယ်လို့ ဝမ်းသာစကားဆိုလာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဒုတိယမြောက် ထီသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်…။ နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင်တွင် ဘုရားလာဖူးရင်း ထီထိုးရာ ရန်ကုန်မှဘုရားဖူးမိသားစုသိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူး နေပြည်တော်၊ လက်လုပ်တောင်သာဝက၊ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်၏တပည့်သာဝက ရန်ကုန်မြို့နေ ဦးအောင်နေလ+ ဒေါ်ဝေဝေလင်း မှ လက်လုပ်တောင်ဘုရားဖူးခဲ့ပြီးကံစမ်းခဲ့သော ထီလက်မှတ်မှာ … […]
ကနျြရှိသေးသညျ့ ထီဆုမြားကို မလေ (၂)ရကျနတှေ့ငျ ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈသှားမညျ . . .
(၁၅) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီဖှငျ့ပှဲ ဆယျသိနျးဆုမြား ဖှငျ့လှဈပွီးပါက ရပျနားကာ ကနျြရှိသေးသညျ့ဆုမြားကို မလေ (၂)ရကျနတှေ့ငျ ပွနျလညျ ဖှငျ့လှဈသှားမညျ ဖွဈပါသညျ ထီသမိုငျးတှငျ စံခြိနျတငျကနျြရှိသညျ့ ရောငျးမကုနျထီမြားပဲဖွဈပါသညျ။ Source – Kyaw Thu Tun (၁၅) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲ ဆယ်သိန်းဆုများ ဖွင့်လှစ်ပြီးပါက […]
(၁၅)ကွိမျမွောကျ ထီပေါကျစဥျ . . .
(၁၅)ကွိမျမွောကျ ထီပေါကျစဥျပေါကျဂဏနျးအားလုံးEditလုပျတငျပေးသှားမှာပါ သိနျး(၁၅၀၀၀)ဆု စ ၄၄၁၇၉၈ သိနျး(၁၀၀၀၀)ဆု ည ၅၅၈၀၀၄ သိနျး(၅၀၀၀)ဆု ဌ ၆၃၂၀၄၄ သိနျးနှဈထောငျဆု ကဃ ၅၅၃၂၂၄ ဆ ၆၂၉၀၉၅ သိနျးတဈထောငျဆု ည ၂၃၁၁၄၅ ဝ ၉၈၄၀၂၀ သိနျးငါးရာဆု ဟ ၁၁၈၅၅၆ ည […]
သာသနာအတှကျ ခြီးကြူးဂုဏျပွုစရာ ၁၃ ဘှဲ့ရ ဆရာလေး တဈပါးပျေါထှကျလာပါပွီ
မြက်ဖြတ်သည့် စက်အင်ဂျင်နဲ့ မြန်မာပြည်ကပထမဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံး RCလေယာဉ်ပျံ ပြုလုပ်ပြီး မောင်းပြခဲ့တဲ့တီထွင် ဖန်တီးရှင်
ကျွန်းလှမြို့ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ရှေးဟောင်းဘုရားများနှင့် ဘုရားခြေတော်ရာတွေ့ရှိ . . .
ငွေ(၆) သိန်းအတွက် တစ်နှစ်လုံးစာ ကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေး(၂)ယောက်ရဲ့ သနားစရာအဖြစ်